Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo oo maalmihii ugu dambeysay ay dagaalo ka dhacayeen – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Wararkii ugu dambeeyay xaaladda magaalada Gaalkacyo oo maalmihii ugu dambeysay ay dagaalo ka dhacayeen
Wararkii ugu dambeeyay ee saakay laga helaayo xaalada magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug ayaa ah mid aad u degan, inkastoo ay weli jirto xiisad colaadeed oo ka dhex taagan ciidamada kala taabacsan maamulada Galmudug iyo Puntland.
Ciidamada Galmudug iyo Puntland ayaa ciidamo badan kala geeyay galbeedka magaalada Gaalkacyo, halkaas oo maalmihii ugu dambeysay uu labadaasi dhinac iska hor-imaadku ku dhex maray, kaasoo ka dhashay qasaare dhimasho iyo dhaawac leh.
Sidoo kale, waxaa aad u yar dhaq-dhaqaaqa ganacsi iyo isku socodka gaadiidka ee ka jiray magaalada Gaalkacyo, waxaana inta badan maanta xiran goobaha ganacsi, iyadoo ay jirto cabsi colaadeed oo hareeysay dadka ku nool magaaladaas.
Inta badan dadka deegaanka ayaa isaga barakacay guryahooda ku yaalay magaalada Gaalkacyo, iyagoo u ruqaansaday dhinaca baadiyaha ee ku yaala magaaladaas.
Dhinaca kale, waxaa soo baxaaya baaqyo isdaba-joog ah oo ay jeedinayaan dowladda federaalka Soomaaliya, beesha caalamka iyo waxgaradka gobolka Mudug, waxaana ay ku baaqayaan in xiisada colaadeed la joojiyo, islamarkaana khilaafka lagu xaliyo miiska wada-hadalka.